Dowladda Mareykanka oo Kenya ugu deeqday diyaarado ay kula dagaalamaan Al-Shabaab - Awdinle Online
Dowladda Mareykanka oo Kenya ugu deeqday diyaarado ay kula dagaalamaan Al-Shabaab
January 27, 2020 (AO) – Dowladda Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaarado dagaal ugu deeqday ciidamada Dowladda Kenya, si ay ugula dagaalamaaan kooxda Al-Shabaab.
Diyaaradaan la siiyey oo ah nooca MD-530F ayaa gaaraya ilaa lix diyaaradood, waxaana la sheegay in Kenya loo siiyey, si ay ugu adeegsato howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
General Stephen Townsen oo ah taliyaha ciidanka ee AFRICOM oo Kenya ku wareejiyey diyaaradahaan, ka dib munaasabad ka dhacday Nairobi ayaa sheegay inay arrintaan qeyb ka tahay iskaashiga dhanka amniga ee ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Kenya.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay sii wadi doonaan taageerada Milatari ee ay siiyaan ciidanka Kenya, islamarkaana ay markale ugu deeqi doonaan diyaarado kale.
Saraakiisha ugu sar sareeysa Milatariga Kenya oo madasha ku sugnaa ayaa ka mahadceliyey diyaaradaha loogu deeqay, waxayna sheegeen inay laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka wadaan Kenya iyo Soomaaliya.
Mareykanka ayaa qeyb ka ah dagaalka Al-Shabaab, wuxuuna duqeymo ka fuliyaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Hase ahaatee diyaaradaha dagaal ee haatan la siiyey Kenya ayaa ku soo aadaya, iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fuliso wadankaasi, waxaana dhowaan ay weerartay saldhig ay ciidanka Kenya iyo kuwa Mareykan ah ku leeyihiin gobolka xeebta ee Laamu.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Markii 7aad u Safraya Eritria
Next articleHeads of State and Government Meeting Between Eritrea, Ethiopia and Somalia Joint Communiqué